PIED ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေဖြင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု" နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
UPDATE: အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သော peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဒါဟာ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်စာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှုပါပဲ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါစက္ကူကိုလည်းညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများကို examine ။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဟူသောအယူအဆသည်တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာနှင့် Ayurvedic အစဉ်အလာမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဓလေ့ထုံးစံများသည်တရားဝင်မှုရှိသည့်တိုင်သူတို့၏လေ့ကျင့်သူများသည်အနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာအရသူတို့၏ဓလေ့ထုံးစံများကိုတရားမျှတစွာစတင်သောအခါအမှုအရာများသည်ပြိုသွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရှင်းလင်းချက် ဒီတစ်ခုသံကို sciency နဲ့တူဒါပေမယ့်အများကြီးသိပ္ပံနည်းကျအခြေခံခြင်းမရှိဘဲကွေးမြား, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးမှားယွင်းတဲ့ (အကြောင်း, အနောက်တိုင်းစတိုင်သုတေသနကမထောက်ပံ့နေသည်) ဖြစ်ပါသည်။ အထဲတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ထဲကဓာတုပစ်စညျးလမ်းကြောင်းထဲကအတော်များများဖြစ်ပွားကြပါဘူး။ ရေးသားသူထုတ်လုပ်ဇီဝြဖစ်စဉ်နှင့်အတူလိုက်ဖို့ဇီဝြဖစ်စဉ်ပေါင်းဘော်ရောနှော။
စိုက်ထူထိန်းချုပ်ထားပုံ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောတိကျမှန်ကန်ဗားရှင်းကဒီမှာဖြစ်ပါသည်: ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အ oxytocin ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အထီးကြွက်များတွင် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန် (2011) ၏တစ်ဦးကပြန်လည်စစ်ကြောသို့မဟုတ်ကားချပ်များဖြင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ။ ဒီမှာ။
ဤအတောအတွင်းဒီနေရာမှာဆက်စပ်သည့်ရှင်းပြချက်ကိုပု YBOP ဧည့်သည်အတွက်အမှားအယွင်းများအနည်းငယ်နေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါ hypothalamus လိင်စိတ်နိုးထမှုအရာ neurohormone dopamine ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဆုချီးမြှင့် circuit ကို (nucleus accumbens) ၏ dopamine အာရုံကြောဆဲလ် hypothalamus သို့ Impulses သတင်းပို့ပေးပို့သည်။ hypothalamus သည် oxytocin ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံခံဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အာရုံကြောများကိုလှည့်ရန်၊ ကျောရိုးအတွင်းရှိအာရုံကြောများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ထုထည်အမျိုးအစားအများစုကိုထိန်းချုပ်သောဆုလိုင်းသည် dopamine ဖြစ်သည်။
သငျသညျလိင်နှိုးဆွခံစားမိသောအခါ, ဦးနှောက်လိင်အင်္ဂါအတွင်းသွေးကြောထဲသို့ neurotransmitter acetylcholine ဖြန့်ချိ
အယူမှား။ အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Acetylcholine ကနေဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် parasympathetic အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင် သွေးထဲသို့မဟုတ် penile တစ်ရှူးချိတ်ဆက်။ acetylcholine ပါဝင်ပတ်သက်သော်လည်း, penile စိုက်ထူများအတွက်အဓိက neurotransmitter NO (နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်) သည် "ထူးခြားတဲ့အုပ်စုတစ်စုကနေဖြန့်ချိသောNon-adrenergic non-cholinergic (NANC) "အာရုံကြော။
အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်း overproduction မှအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Over-သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ,
အယူမှား။ သွေးစစ်ဆေးမှုခဲ့ကြသူယောက်ျားကနေအားလုံးအစီရင်ခံစာများနှင့် အားလုံးစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား, ဒီအယူမှားဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
dopamine စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း epinephrine (adrenaline) ရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက adrenal ဂလင်းအတွက်ပိုလျှံ dopamine ရလဒ်များကို epinephrine overproducing နှင့်ရန်ပွဲ-or-ပျံသန်းစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ကြာရှည်ပြည်နယ်ထဲမှာကိုယျခန်ဓာချပြီး။
ဝက်လက်ျာဘက်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမှားယွင်းနေ။ Dopamine norepinephrine ရန်ရှေ့ပြေးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ထုတ်လုပ်သည့် dopamine အကျိုးကိုဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ရှိနေမည်နှင့် adrenals သွားရောက်မထားဘူး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, norepinephrine dopamine ကနေဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဟော်မုန်းအဖြစ်ထိုအသွေးထဲသို့ adrenal medulla ကနေဖြန့်ချိခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း cortisol နှင့်အတူ။
အယူမှား, ဦးနှောက် dopamine ဦးနှောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ, နှင့် adrenals စေခြင်းငှါစေလွှတ်သည်မဟုတ်။ ဒါ့အပြင် cortisol သွေးထဲတွင် dopamine ကထိန်းချုပ်ထားသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်အလှည့်အတွက်ဦးနှောက် CRF ကထိန်းချုပ်ထားသောသွေး, သို့ဖြန့်ချိ ACTH ကထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ dopamine ဟာ porn-induced ED နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သိပ်သိပ်မများလှပါဘူး။ ခေါ်တယ် desensitization နှင့် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါပြproblemနာကို "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်" ၏ကိစ္စမဟုတ်, စွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူဖော်ပြဖို့ကြိုးစားနေတာက adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်းသူဖော်ပြသောဇီဝဓါတုဗေဒလမ်းကြောင်းများမှမဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သော adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု (cortisol နိမ့်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း) ၏လက္ခဏာများမှာများပြားလှသည်။ ED သည်စာရင်းတွင်ရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်သည်။ စကားမစပ် MD အများစုသည် 'adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု' ကိုအသိအမှတ်မပြုသော်လည်းလူနာများတွင်အခြားဟော်မုန်းများနည်းနေသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောဟော်မုန်းများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွင်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောဟော်မုန်းများနှင့်ဆက်နွှယ်သောရောဂါလက္ခဏာအမျိုးအစားများစာရင်းဖြစ်သည်။ http://www.stopthethyroidmadness.com/adrenal-info/symptoms-low-cortisol/
ဤဆောင်ပါး အခြေခံအားဖြင့်အထက်ပါဆွေးနွေး Herballove ဆောင်းပါး၏အဓိကစာတမ်းတစ်ခေါက်-off ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှင်းပြခဲ့သည်သကဲ့သို့, ဆောင်းပါး၏သိပ်ရိုးရှင်းစွာမမှန်ကန်ပါ။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောလိင်တံကိုသွားသောကျောရိုးအာရုံကြောမှဖြစ်ပျက်အဖြစ်လူသိများကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများအဘယ်သူအားမျှမဆိုသုတေသနလေ့လာမှုများအားဖြင့်တက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။
အနောက်တိုင်းဆေးပညာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဟူသောဝေါဟာရကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများစွာတွင်တွေ့ရှိရသောယာယီအခြေအနေတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ကြွက်များတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
Semen ယိုစိမ့်မှုကြောင့် parasympathetic အာရုံကြောများအားနည်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ Parasympathetic အာရုံကြောဟာသုက်လွှတ်အဆို့ရှင်ပိတျကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူကိုင်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါဟာအားနည်းအာရုံကြောနှင့်အတူစိုက်ထူကိုင်ဖို့ခက်ခဲပြီးအဤအရပ်မှသုတ်ရည်ယိုစိမ့်၏ပြဿနာပေါ်ပေါက်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, မှန်မှန်လေ့ကျင့်လျှင်, acetylcholine / parasympathetic အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်။
ဘာဖြစ်သလဲ? အာရုံကြောတွေကမဟောင်းနွမ်းဘူး။ သင်၏မွေးဖွားခြင်းမတိုင်မီလများ မှစ၍ သေဆုံးသည့်အချိန်အထိ acetylcholine ကိုနှလုံးထဲသို့လွှတ်ပေးသည့် parasympathetic အာရုံကြောများကောအသို့နည်း။
ကြီးမြတ်သောအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါ stimulation လိင်ဟော်မုန်းနှင့် acetylcholine, dopamine နှင့် serotonin နဲ့တူ neuro-က transmitter ထုတ်လုပ်မှုကျော်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitters ၏တစ်ဦးကပိုကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်, ဦးနှောက်နှင့် adrenal ဂလင်းအလွန်အကျွံ dopamine-norepinephrine-epinephrine ပြောင်းလဲခြင်းဖျော်ဖြေဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြီးပြည့်စုံသောအနတ္တ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်လိင်မှုကြောင့်လိင်ဟော်မုန်းများပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမျှမရှိပါ။ ဖော်ပြထားသော neurotransmitter (၃) ခုသည် ဦး နှောက်မှ ထွက်၍ လည်ပတ်ခြင်းမ ၀ င်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏မညီမျှမှုကသွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် adrenal gland များကိုတိုက်ရိုက်မထိခိုက်နိုင်ပါ။ “ dopamine အလွန်အကျွံပြောင်းလဲခြင်းကို norepinephrine” ဟူ၍ မရှိပါ။ ဤအရာအလုံးစုံသည်လုပ်ကြံထားသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်၊
ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာကျနော်တို့ရှိပါသလဲ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ခုခု parasympathetic အာရုံကြောမှဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်စိုက်ထူတာဝန်ရှိသည်အာရုံကြောရုံ parasympathetic ထက် ပို. ဖြစ်ကြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းပြဿနာနှင့်၎င်း၏ resolution ကိုသေးဆင်းလာ dopamine အချက်ပြအတွင်းကျဆင်း အာရုံကြောများ၏လေသံကိုသာသက်ရောက်သောဦးနှောက်ထဲမှာလိင်တံ innervating ။
ဤလေ့လာမှုက "psychogenic ED" သည်ဆုစင်တာနှင့် hypothalamus ရှိမီးခိုးရောင်အရာများဆုံးရှုံးခြင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် subcortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ Macrostructural ပွောငျးလဲ (2012) ဤအနိမ့်-dopamine အယူအဆနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဤသည်ကျွန်ုပ်၏အတွက်ဆိုခဲ့အတိအကျကဘာလဲ Porn & ED လွန်ခဲ့သော2နှစ်ကဗီဒီယို။ ဒီအပေါ်ငါ့ကိုယ်ပိုင် ဦး ချိုမှုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဦး နှောက်စိုက်ထူခြင်းစင်တာများကိုအခြားကျန်းမာသောလူငယ်များတွင်နာတာရှည် ED ကိုရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်မှာရိုးရှင်းပါသည်။
ယောက်ျားလိင်အကြောင်းလေ့လာစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဤအတောအတွင်းဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်အဓိကလင့်ခ်သုံးခုကိုကြည့်ပါ။ အော်ဂဇင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှု?
၁) ဆေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ အဘယ်သူမျှမလူသိများဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် pooh-pooh အတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းအယူအဆကိုထောက်ခံရန်သိပ္ပံပညာမရှိပါ။
2) လူငယ်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ 50s အတွက်အဟောင်းယောက်ျားတွေထက်အများကြီးပိုနှေးပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းကဒီက disproves ။
၃) PIED မှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များသည်ကြိမ်နှုန်းနည်းနည်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်ကြသည်။ တစ်နေ့သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း (PS - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကဘာလဲ ??)
(၄) တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာသုက်လွှတ်ခြင်း (Bodybuilding sites) ယောက်ျားလေးများမှ PIED ၏အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်ရှိသည်။ အခြားသူများက PIED မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည် - သို့သော် porn တစ်ခုတည်းသို့သာပြန်သွားကြသည်။
5) နီးပါးသည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများရှိခဲ့သူကို PIED နှင့်အတူတိုင်းကောင်လေးအဘယ်သူမျှမမူမမှန်ခဲ့သညျ။
၆) လိင်မှုကိစ္စများစွာရှိသောအမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်သနည်း။ တနည်းအားဖြင့်စကားမပြောနိုင်သော ED နားမလည်သည့်လူငယ်ယောက်ျားများသည်မည်သည့်နေရာတွင် PORN မသုံးပါသနည်း။
၇။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ပါကအဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုနေစဉ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကဘာကြောင့်ပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်တာလဲ။
သင်သည် "အကြောင်းရင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိအဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း" ဟုသင်စဉ်းစားမိပေမည်။
ဘာကြောင့်လဲ ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဟုမှားယွင်းစွာယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိဘဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း။ သူတို့က "ပိုလျှံသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း" ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေရဲ့အကြောင်းရင်းလို့ယုံကြည်လို့ပါ။ များစွာသောသူတို့အဖို့တော့ဒါကအလုပ်မလုပ်ပါ၊ အသစ်အဆန်းက dopamine dysregulation (စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်) ကိုဖြစ်စေသည်။
ရာနှင့်ချီသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည် YBOP နှင့်ချိတ်ဆက်သောကြောင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုကုသရန်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်သောယောက်ျားများစွာကိုငါတွေ့ခဲ့သည်။ porn ဖြတ်တောက်သည့်အခါသူတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဘူး ဒါကပြtheနာကသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ penises မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်အနားယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာပြpornနာများမဖြစ်ပေါ်သေးသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမသုံးရသေးသောသန်းနှင့်ချီသောလူငယ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ED / DE ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုပုံစံကိုလက်ခံပါကနောက်ယုတ္တိရှိသည့်ခြေလှမ်းမှာအင်တာနက် porn သည်ပြproblemsနာမရှိပါဟုယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကလက်ရှိမှတ်မှတ်ရရဖြစ်ပြီးငါတို့မှားတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ၎င်းသည် ED နှင့်နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုဖြစ်စေရုံသာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာရှိသောလိင်အရသာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ အချို့သောမိတ်ဖက်များအပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုလျော့နည်းစေခြင်း၊
“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ကို PIED ၏လက်ခံမှုကိုလက်ခံခြင်းသည်ကြားနေမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြုပြင်ခြင်းအပါအ ၀ င်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်။
ကနေတစ်ဦးကမှတ်ချက် ဒီချည် သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်မျှမျှတတအပေါ်, "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်" ဆွေးနွေးခြင်း:
ဤသည် Gibson ဒီနှင့်အတူခြံစည်းရိုးပေါ်မှာနေသောမည်သူမဆိုအဘို့, ဒါကြောင့်အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်။ ငါနှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ (porn မပါဘဲ) တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အထက်တန်းကျောင်းမှတစ်ဆင့်တစ်ကိုယ်တည်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ကောလိပ်တွင်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းစတင်ခြင်း၊ နေ့ခင်း ၃ ကြိမ် (သို့) အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်နှက်မည့်ရက်စွဲပါအမျိုးသမီးများအားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ နေ့တိုင်း။ ငါ့မှာပိန်ပိန်ပိန်ပိန်တွေ၊ လိင်ခြားသူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ချိန်များစွာရှိခဲ့တယ်၊
အသက် ၂၄ နှစ်မှာ ၈ လလောက်ကြာပြီးကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၈ လကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာတစ်နေ့တာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ Bam! နောက်တစ်နှစ်ငါငါကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေသော Ed ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်သင်၏ ED ကိုဖြစ်စေသည်ဟုယူဆသူမည်သူမဆိုသည် ဦး နှောက်ကိုမှန်ကန်စွာဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီးသင့်ရှေ့တွင်အဝတ်အချည်းစည်းရှိနေသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိလျှင်၎င်းသည်သင်ရိုက်ကူးသည့်တိုင်သင့်အားစိုက်ထူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ သငျသညျ cum သည့်အခါဖုန်မှုန့်။ ငါသိ, ငါအခြားဘက်ခြမ်းကိုမြင်ရပါတယ် porn အသစ်အဆန်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ကိုမတတ်နိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုကျိုးပဲ့စေခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကိုပြောချင်တာကငါဟာ O. ကတည်းကနှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာပြီဆိုတာငါသတိထားမိတယ်။ ငါ reboot တစ်လျှောက်မှာလိင်အရ masturbating နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ porn ကိုကြည့်ရတာလုံးဝသည်းမခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆရာဝန်များနှင့်အခြားဘဝပုံစံပြောင်းလဲမှုများမအောင်မြင်သောနေရာများတွင်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုညစ်ညမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်သငျသညျအရှေ့တောင် websites များအတွက်သင်ကသူတို့ကိုမရောင်းဖို့ကြိုးစားသောအရာကိုထက်မူးယစ်ဆေးစတိုးဆိုင်မှာအစိတ်အပိုင်းကုန်ကျကြောင်းအချည်းနှီးဖြည့်စွက်ရောင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့မုသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အလေးအနက်ထား, Gibson, သင်မည်သို့ကြိုးစားကြနှင့်ဤကြိုးပဲ့အပူတပြင်းလူများ၏ဒုက္ခအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ရဲ?
မင်းကမင်းကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မင်းပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါတို့တုန့်ပြန်မှုက 'ငါမဟုတ်ဘူးပြthat'sနာမဟုတ်ဘူး၊ သင်က၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပြီး၎င်းတို့သည် 'သိပ္ပံ' အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသော shitty site ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးသင့်အားစျေးနှုန်းချိုသာသောဗီတာမင်များဖြင့်ရောင်းချသည်။